Shirkadaha xayeysiinta waxay raadiyaan siyaabo ay ugu xirmaan xogta kale FLoC | Laga soo bilaabo Linux
FLoC waa qaab otomaatig ah oo loogu talagay xayeysiinta adoon laheyn cookies ka socota Google oo "ilaalineysa asturnaanta" iyada oo la siinayo dadka isticmaala internetka aqoonsi la'aan ka weyn cookie-ka saddexaad.
Si kastaba ha noqotee, FLoC waxay ka dhigi kartaa mid dhakhso badan oo fudud shirkadaha xayeysiinta inay aqoonsadaan oo ay helaan macluumaadka oo ku saabsan dadka khadka tooska ah, sida xogta gaarka ah iyo u doodayaasha anshaxa ay filayeen, shirkaduhu waxay bilaabeen inay isku daraan aqoonsiga FLoC iyo macluumaadka muuqaalka jira ee la aqoonsan karo.
Shirkadaha tiknoolajiyada ee ka shaqeeya suuqa maareynta aqoonsiga dhijitaalka ah ayaa sheegaya in aqoonsiyaashu ay gacan ka geysan doonaan hagaajinta saxnaanta nidaamyada lagu aqoonsado aqoonsiga dadka waxayna xitaa u noqon karaan aqoonsi joogto ah.
Mathieu Roche oo ah agaasimaha ID5 ayaa yidhi: "Calaamadaha badan ee aan haysanno, ayaa sii saxnaan doonna, aqoonsiga FLoC-na wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah calaamadaha aan adeegsan doonno."
Google wuxuu u qoondeeyay FLoC inuu yahay nashqadeysi xayeysiis saaxiibtinimo u gaar ah maxaa yeelay qaabku dadka ulama socdo shaqsi ahaan. Taabadalkeed, FLoC waxay adeegsaneysaa barashada mashiinka si ay isuguxirto dadka iyadoo ku saleysan boggaga internetka ee ay booqdeen.
Intaa waxaa sii dheer, Aqoonsiga FLoC ee loo qoondeeyay dadka ayaa la cusbooneysiiyaa toddobaadle, taas oo loogu talagalay in lagu sifeeyo iyaga oo si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah iyo u xaddidaya adeegsiga Aqoonsiga FLoC aqoonsi joogto ah. Maaddaama nidaamku si otomaatig ah ugu shaqeynayo daalacayaasha shabakadaha sida Chrome, Google si sax ah uma qeexayo sida ay isugu keento wada-hawlgalayaasha.
Si kastaba ha ahaatee, warshadaha xayeysiinta (kaas oo qaatay tiknoolajiyada aasaasiga ah ee internetka sida cookie-ka iyo cinwaanka IP si loogu aqoonsado dadka internetka) arag fursad aad ku sameysid si lamid ah Aqoonsiyada FLoC rajeynaya in laga hortago in la waayo buskudka.
Waqti ka dib, Aqoonsiga FLoC wuxuu u shaqeyn karaa aqoonsi joogto ah si la mid ah cinwaanada IP, ayuu yidhi Nishant Desai, agaasimaha teknolojiyadda iyo hawlgallada kooxeed ee Xaxis, qaybta adtech ee GroupM.
Sida cinwaanada IP, Aqoonsiyada FLoC ma noqon doonaan kuwo gebi ahaanba taagan. Si kastaba ha noqotee, isla Aqoonsiyada 'FLoC IDs' ama isku mid ah Aqoonsiga ayaa laga yaabaa inay la xiriiraan qof.
"Haddii dabeecaddiisa aysan isbeddelin, algorithm-ka ayaa sii wadi doonta inuu ku saameeyo isla kooxdaas, sidaas darteed qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay lahaan doonaan aqoonsi FLoC ah oo joogto ah oo lala xiriiriyo, ama ay yeelan karaan mid."
Qareenada u gaarka ah waxay ku doodeen in aqoonsiyada FLoC ay yareyn karto dhibaatada shirkadaha si ay u ururiyaan macluumaadka shaqsiyeed.
In kasta oo illaa hadda isticmaalaha webku ay ahayd inuu soo booqdo degel ugu yaraan hal jeer ka hor intaysan degmadu buskud ku rid mashiinkooda si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqooda shabakadda, ID-ga FLoC iyo calaamadaha ay soo saarto ayaa la ogaan doonaa.
Marka lagu daro isku xirka aqoonsiga FLoC noocyada kale ee xogta, Habka bartilmaameedka cookieless-ka ee Google ayaa loo isticmaali karaa kaligiis si loo abuuro astaamaha dhagaystayaasha.
Si kastaba ha noqotee, way cadahay in shirkadaha kale ay u arkaan aqoonsiyada FLoC inay yihiin macluumaad aqoonsi oo qiimo leh, taas oo ah sababta dadka u dooda arimaha gaarka ah sida Cyphers ay u arkaan inay yihiin arrimo khuseeya asturnaanta, taas oo aan ahayn aragti ahaan.
Chrome waxay u qoondeyn doontaa aqoonsi FLoC ah isticmaale kasta oo Chrome ah oo aan diiwaangelinta ka bixin, naafada ka dhigeysa sanduuqa sanduuqa asturnaanta ee kumbuyuutarka ama ku xayiraya kordhinta. Marka xitaa haddii qof waligiis uusan booqan goob ka hor, Aqoonsiga FLoC wuxuu soo bandhigi karaa macluumaad ku saabsan qofkaas oo laga yaabo in nidaamka ama nidaamka xayeysiiska uusan lahayn.
Tusaale ahaan, marka la isu geeyo, tilmaamahan xogtan waxay muujin karaan jinsiga qofka, haddii ay u badan tahay inay ku jiraan qaanso dakhli ka sarreeya ama ka hooseeya dakhli cayiman, ama haddii ay ku nool yihiin gobol cayiman.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Shirkadaha xayeysiinta waxay raadiyaan siyaabo ay ugu xirmaan xogta kale FLoC
Maajo 2021: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah